कहिले पाउला प्रदेश-२ ले स्थायी नाम र राजधानी ? « risingsunkhabar
कहिले पाउला प्रदेश-२ ले स्थायी नाम र राजधानी ?
प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७८, शुक्रबार १२:०२
काठमाडौं । प्रदेश-२ को स्थायी नाम र राजधानी टुंगाे लगाउने प्रकिया लम्बिने देखिएकाे छ ।
प्रदेश-२ काे राजधानीमा भन्दा नाममा बढी विवाद छ । प्रदेश सभामा प्रदेशको नामको किचलो कायमै छ । चालु प्रदेश सभा बैठकबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंग्गाे लगाउन प्रदेश सभा सचिवालयमा नाम र ठाउँ दर्ता गर्न आव्हान गरिएको थियो । नाम र राजधानी प्रस्ताव गर्न वैशाख २ बाट सात दिनको म्याद तोकिएको थियो । साे अवधिमा नामसम्बन्धी ६ वटा र राजधानीका लागि सात वटा प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
प्रदेशको नाम सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेस राख्न प्रस्ताव गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेश नाम राख्न छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । नेपाली कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा नाम प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसका राजेश्वरप्रसाद साहले मध्यमधेस प्रदेश नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेले जानकी प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । एमालेकै शारदादेवी थापाले जनक नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
राजधानीका लागि भने जसपा, एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जनकपुरधामलाई प्रस्ताव गरेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा केही सांसद्ले वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ ।
आजबाट सुरु भएको प्रदेश सभा बैठकले नाम र राजधानीको टुंगाे लगाउने कार्य योजना भए पनि राजधानीको नामकाे विषयले यो बैठकबाट पनि प्रदेश २ को राजधानी टुंगाे नलाग्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी जनकपुर नै राख्ने विषयमा राजनीतिक सहमति देखिएपनि नामबारे भने दलहरुबीच सहमति देखिएको छैन । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यक पर्छ ।
प्रदेश-२ को प्रदेश सभामा १ सय ७ जना सांसद् छन् । तीमध्ये आफ्ना ४ जना सांसद्लाई माओवादीले कारबाही गरिसकेको छ । अहिले सत्तारुढ जसपाका ५५, एमालेका २१, कांग्रेसका १९ र माओावादी केन्द्रका सात तथा संघीय समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् ।
यस अघि पनि ०७६ साल चैत ४ गते प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश सभामा मतदान भएको थियो । तर दुईतिहाइ बहुमत नपुगेपछि प्रदेशको नाम र केन्द्र तोक्न प्रदेश सभा असफल भएको थियो ।